Rutsva rweWikiLeaks Rwosvibisa Maoko Akawanda muZimbabwe
Gunyana 05, 2011
The Internet homepage of Wikileaks is shown in this photo taken in New York, Wednesday, Dec. 1, 2010. WikiLeaks' release of secret government communications should serve as a warning to the nation's biggest businesses: You're next. (AP Photo/Richard Drew
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapato ezvematongerwo enyika zvichitevera mashoko akaburitswa ne WikiLeaks pamusoro pemashoko akataurwa nevakuru mumapato muhurukuro dzemuchivande dzavakaita nevaimbove vamiriri veAmerica mu Zimbabwe, Ambassador Chrostopher Dell na Ambassador James McGee.
WikiLeaks yakaburitsa svondo rapera hurukuro dzakaitwa pakati penhengo mbiri dze MDC-T, Va Nelson Chamisa, munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvematongorwo enyika mubato iri, pamwe naVa Obert Gutu, mutauriri weHarare mubato apo vakasangana naVa McGee.
Vaviri ava vanonzi vakati mutungamiri wavo, VaMorgan Tsvangirai, munhu asina kusimba zvakadzama mukutungamira bato. Vaviri ava vanonzi vakawiriranawo kuti VaTsvangirai munhu anonetseka pakutora matanho akadzama.
WikiLeaks yakaburitsawo hurukuro dzakaitwa pakati pemumiriri weAmerica nagavhuna webhanga guru renyika, Va Gideon Gono, vachiti vakaudzwa kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, havana hupenyu hwakareba sezvo vari kurwara nechirwere chegomarara. VaGono vanoti vakaudzwa nemudzimai waVaMugabe kuti VaMugabe munhu akura anofanirwa kusiya basa.
VaGono vanonzi vakaudza VaMcGee muna 2008 kuti VaMugabe vasarirwa nemakore matatu kana mashanu kuti vafe nechirwere chiri kuvanetsa. Asi Va Gono vari kuramba mashoko aya mupepanhau re Newsday.
Nyanzvi mune zvematongerwe enyika, Va Charles Mangongera, vanoti pane zvizhinji zvichachinja mu ZANU-PF kuburikidza nezvabuda mu WikiLeaks, kunyanya kudonhedzwa kwevakabuda mumagwaro aya.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Va George Shire, vanoti zviri kubuda mu WikiLeaks zvinhu zvagara zvichizivikanwa nevanhu munyika, uye hazvina zvazvinoshandura.
Hurukuro naVa George Shire